Mohamed Sheikh – Page 2 – Puntland News
Author: Mohamed Sheikh
Waa maxay rasaasta Gaalkacyo ka socota iyo howgalka haatan ka socda +toogashada suuqa ka dhacday.
Askari katirsan maamulka Galmudug oo canshuur aruuriye ah ayaa maanta barqadii suuqa Gaalkacyo ku dilay nin rayid ah oo kasoo jeeda Puntland. Dilka ninkaan shacabka ah ayaa dhalisay xiisad magaalada laga dareemay, xilli magaalada Gaalkacyo laga waday dadaalo nabadeed oo…
December 29, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 0
DAAWO: Mid kamid ah ciyaartoydii Puntland oo kabihiisii lagu iibsaday suuqyada Garowe iyo qiimihii ugu sareeyay oo lasiistay.
Ciyaaryahan Yacquub Cismaan oo kamid ah ciyaartoyda Puntland, ayaaa kabihii uu ku ciyaarayey isla markaana uu ku reebay Gobolka Banaadir waxaa lagu iibiyey carwada Gool Sports ee Garowe ku taal. Eng Qalinle oo kamid ah dhalinyarada ayaa ku iibsaday $200…
DEG-DEG+SAWIRRO:- Tuuladii Gumburka oo gabi ahaanteedba la gubay, xaaladihii ugu dambeeyay ee colaada koonfurta Sool iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland oo ku dhowaaqay……………
DEG-DEG+SAWIRRO:- Tuuladii Gumburka oo gabi ahaanteedba la gubay, xaaladihii ugu dambeeyay ee colaada koonfurta Sool iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland oo ku dhowaaqay…………… Tuulada Gumburka oo ah halkii uu dhowaan ka qarxay dagaalkii u dhexeeyay beelaha Cumar Maxamuud iyo…
Calmadow waa deegaan cilmo ahaan ka duwan magaalooyinka kale ee Soomaaliya, waxaa ku yaala dhowr tuulo, sidoo kale waa dhul dalxiiska ku wanaagsan waa dhul qabow ah oo dhulka ka sareeya wax badan, tuulooyinka sida Moon oo kale waxaa…
WAR DEGDEG AH: SAWIR:- Xuutiyiinta oo labo Gantaal kusoo tuuray Somaliland, Halkee ayay ku dhaceen?
Kooxda Xuutiyiinta Shiicada ee Yemen ayaa Labo gantaal kusoo tuuray Soomaaliland sida lagu ogaaday macluumaad aan weli si dhab ah loogu kalsoonayn oo lagasii daayay mid kamid ah talefishinada laga leeyahay dalka Yemen. Labadaan Gantaalka ayaa lagu waramayaa inay ku…
December 28, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 0
WAR DEG DEG AH: Dowladda Ethiopia oo howlgallo aan caadi ka ahayn ka sameysay Hargeysa iyo Borama iyo saraakiil ugu badnayd oo xabsiga lo taxaabay+Muuse Biixi oo a….
Sirdoonka Ethiopia ayaa Hargeysa iyo Borama ku xidhxidhay qaar ka mid ah Saraakil iyo Askar ka mid ah Sirdoonkisa ka hawlgala magaaloyinkasi sida ay Puntlandnews warka kagga heshay. Wararka aan helnay waxay sheegayaan in dowladda Ethiopia ay xabsiga dhigtay taliyahii…
DEG-DEG: AKHRISO: Jabhadda ONLF oo si xoogan uga hadashay xasuuqa lagu hayo Soomaalida Ethiopia kuna dhowaaqday go’aan culus.
Jabhadda ONLF ayaa warsaxaafadeed kasoo saartay 170 Shacab Soomaali ah oo ay maleeshiyo Oromo ah ku xasuuqeen dhulka Ismaamulka Oromiya, gaar ahaan Galbeedka Gobolka Hararge. Xasuuqan ayaa wuxuu ka dhacay tuulooyinka kala ah Gadula, Arooreti, Majaare, Balbaleyti, iyo Huluqo. …
DEG-DEG: DAAWO: Madaxweyne Farmaajo oo soo gabagabeeyay rajadii maamulka Somaliland iyo Dowladda Qadar oo lu dhowaaqday war kale oo farxad leh.
Muqdisho, 28 Disembar, 2017; Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa daah-furay munaasabad lagu maamusayey dib u soo celinta maamulka hawada Soomaaliya. Madaxweynaha oo xarigga ka jaray xarunta iyo qalabka hawada lagu maamulayo ayaa kormeeray shaqada ay hayaan…
DEG-DEG:- Madaxweyne Farmaajo oo xilkii ka qaaday xeer ilaaliye ku xigeenkii Soomaaliya iyo sababta xilka looga qaaday oo Puntland heshay.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa xilkii ka qaadey Axmed Cali Abuukar oo ahaa Xeer ilaaliye ku xigeenka koowaad ee Qaranka. Lama sheegun Sababaha xilka looga qaadey iyo cida lagu badelay. Laakiin Warqad ka soo baxdey Xafiiska Madaxweynaha ayaa xil ka looga qaadey. Axmed…
DEG-DEG: DAAWO: Booliiska Garowe oo soo badhigay fadeexad laga faafiyay Agaasimaha mashaariicda Madaxtooyadda Puntland.
Taliyaha saldhiga Garoowe Fardafuul Muuse Bille ayaa maanta warbaahinta usoo bandhigay dabagal iyo baaritaan boolisku ku sameeyay kiis fadeexad ah oo ka dhan ah Agaasimaha mashaariicda Madaxtooyadda Puntland Cabdiqani Dhaashane. Taliye Fardafuul ayaa sheegay inay socdaan baaritaano lagu raadinayo shaqsiyaad…
DEG-DEG: Saraakiil Ethiopian ah iyo Isimada Dhulbahante oo qaatay kulan xasaasi ah iyo xaaladihii ugu dambeeyay dagaalkii………
Maxaa kasoobaxay Kulankii Dhexmaray Weftidii uu horkacayay Garaad Jaamac Garaad Ismail iyo Saraakiisha Ciidamada Ithopia Wafti Balaadhan Uu Hor Kacayay Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil Oo Maaalmihii Ugu Dambeeyay Kusugnaa Deegaanadii Colaaduhu Ka Dhaceen Kulana Gooni Gooniyana La Qaatay Beelaha Baharsame…
DEG-DEG: Daawo: Somaliland oo ku dhowaaqday inay Xabsi dhigayso ciyaartoydii Puntland ee ka qeyb galay tartankii Muqdisho.
DEG-DEG: Daawo: Somaliland oo ku dhowaaqday inay Xabsi dhigayso ciyaartoydii Puntland ee ka qeyb galay tartankii Muqdisho. Maamulka Somaliland oo sheegay in ay ka Go een Soomaaliya inteeda kale ayaa sheegay in ay jiraan Cayaartoy ka soo jeeda maamukaas oo…
DEG DEG:- Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo xaalada ku xumaatay kuna dhowaaqay inay la laabtay go’aankii uuu….
Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa Saddexdii qareen ee u doodayey u sheegay inuu kala noqday wakiilnimadii, kadib warqad qoraal ah oo uu u diray. Waxa uu sheegay Shakuur in aysan qareennadaasi matalin, isaga oo sharci darro ku tilmaamay dacwadda loo…
WAR DEG DEG AH: Madaxweyne Gaas iyo odayaasha Dhulbahante oo caawo go’aan cad isku raacay iyo Camey oo berrito ka tagaya madaxtooyada Garowe+Xiisad…
Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa xidhiidh dhanka telefoonka kula hadlay qaar kamid ah isimada dhaqanka gobolada Sool sanaag iyo cayn isaga oo kala hadlay sidii loo joojin lahaa colaada koonfurta gobolka sool. Isimada uu xidhiidhka la sameeyay…
Wax ka agow saraakiishii iyo nabadoonadii Puntland ee lagu dilay magaalada Gaalkacyo iyo magacyadoodii
1. Siciid Cali Yuusuf Gaadayare oo ahaa mas’uulkii maaliyada Puntland ee gobolka Mudug caana ka ahaa magaalada Gaalkacyo waxaa la dilay 31 March 2016 Qarax ismiidaamin ah. 2. Nabadoon Cabdirisaaq Maxamuud Guhaad : Wuxuu kamid ahaa nabadoonadda gobolka mudug si…
DEG-DEG: Yuusuf Garaad oo si aan gambasho lahayn uga hadlay hadalkii Cabdiraxmaan Cabdishakuur ee ahaa Muqdisho dadbaa marti ku ah.
December 27, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 0
DEG-DEG: SAWIRRO: Madaxweyne Gaas oo gudaha u galay xaafada Koonfurta Gaalkacyo, kalana kulmay wax uusan ka filaynin.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Wefti balaadhan oo uu hogaaminayo ayaa maanta oo ay tariikhdu tahay 27 December 2017 waxaa si balaadhan koon furta magaalada Gaalkacayo ugu soo dhaweeyay Maamulka Galmudug. Madaxawaynaha iyo Masuuliyiinta ku Wehelinaysay…
DEG-DEG: AKHRISO: Garowe oo lagusoo bandhigay gabood faladii xukuumada Gaas geysatay sannadkaan 2017 iyo madaxweyne Gaas oo halis ugu jira inuu waayo…………….
DEG-DEG: AKHRISO: Garowe oo lagusoo bandhigay gabood faladii xukuumada Gaas geysatay sannadkaan 2017 iyo madaxweyne Gaas oo halis ugu jira inuu waayo……………. Warbixintii xaalada xuquuqda aadanaha ee Puntland ee 2016/2017 oo maanta 27 Disembae lagu soo bandhigay Garowe, waxaa…
DEG-DEG: DAAWO: War hadda soo dhacay iyo Dowladda Ethiopia oo doonaysa inay Qalbi Dhagax u magacowdo xil culus. muxuuse ka yidhi magacaabidaan?
Warar hoose oo ay heleyso Warbaahinta Puntlandnews ayaa sheegaya in Dowladda Itoobiya ay dooneyso inay xil u magacowdo Cabdikariin Shiikh Muuse Qalbi Dhagax, oo haatan ah maxbuus gacanta ugu jira. Puntlandnews waxay ogaatay in sarkaal oo horey ciidamada Liyuu Booliska…
DEG-DEG: Madaxweyne Farmaajo oo kusoo wajahan Garowe iyo dowladda Puntland oo ku dhowaaqay warkii ugu cuslaa.
Madaxweynaha dowladda federalka Soomaaliya, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, ayaa booqashadiisii ugu horeysay todobaadka soo socda ku imaandoono magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. Madaxweyne Farmaajo oo doorashadiisii laga joogo ku dhowaad sannad, ayaa weli cagta soo dhigin Puntland, isaga iyo Raysal wasaarihiisa…
December 27, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 1
DEG-DEG: Daacish oo soo saartay digniin xoogan oo ku socota Puntland iyo ajaanibta…….
DEG-DEG: Daacish oo soo saartay digniin xoogan oo ku socota Puntland iyo ajaanibta……. Koox kor kala socota ururada xagjirka ah ayaa sheegay in kooxda Daacish ay soo daabacday waxa loo maleynayo inuu yahay fiidiyoowga ugu horreeya ee ka imanaya…
DEG-DEG:(DAAWO)Suldaankii ka baxsaday Muuse Biixi oo ka dagay Muqdisho kuna dhowaaqay warkii ugu cuslaa……
DEG-DEG: SAWIRRO:- Nin Abeeso korsanayay oo isagii ay ku cuntay magaalada Muqdisho.
Magaalada Muqdisho waxaa xalay ka dhacday dhacdo la yaableh kadib markii nin korsanayay Abeeso, saaxiib dhowna la ahaa, ayaa aakhirkii waxay cuntay iyo dishay ninkii korsanayay. Ninkaan oo lagu magacaabi jiray Xarawa Qabax Xaashi ayaa Abeesadaan ku korsan jiray gurigiisa,…
DEG-DEG: Warbixin waji gabax ku ah madaxweyne Gaas iyo xukuumadiisa oo hadda Garowe looga dhowaaqay.
Garowe (Puntlandnews) Puntland 2016-2017 Waxaa sii kordhay maxaabiista xukun sugayaasha ah oo 2016 tiradoodu gaaraysay 263 halka 2017 tiradaasi gaartay 29. Kororka maxaabiistan ayaa lagu sheegay warbixinta sanadlaha ah ee xafiiska difaaca xuquuqul Aadanaha Puntland siidaayay, taasoo ka hadlaysa sannadkaan…
DEG-DEG: Akhriso: Xildhibaan kamid ah barlamaanka Soomaaliya oo sheegayna inay xilka ka qaadayaan madaxwyene Farmaajo, beesha Daarood ugu baaqay inaysan……….
DEG-DEG: Akhriso: Xildhibaan kamid ah barlamaanka Soomaaliya oo sheegayna inay xilka ka qaadayaan madaxwyene Farmaajo, beesha Daarood ugu baaqay inaysan………. Cabdi Saabir Nuur Shuuriye, oo katirsan Gollaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa weerar afka ah ku qaadey Madaxweyne…
December 26, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 1
DEG-DEG: Akhriso: deg-deg akhriso- madaxweyne Gaas oo magacaabay taliye cusub kadib markii Alshabaab……
Bosaso (Puntlandnews) Madaxweynaha dowladda Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa magacaabay taliyaha howgalinta gobolka Bari, kadib markii habacsanaan ay ku timid shaqadii amni ee gobolka Bari, Shabaabna ay heleen fursado. Xilkaan ayaa loo magacaabay Cabdirisaaq Xaaji Abdalla, oo ah nin…
December 26, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 0
DEG-DEG: Daawo:-Odayaasha Gobolka Sool oo Uu Mahadceliyey Cabdiraxmaan Faroole Beesha Caalamkana ka Codsaaday In la Maxkamadeeyo C/weli Gaas
Qaar ka Mid ah Cuqaasha iyo Waxgaraadka Gobolka Sool oo maanta ka hadlay Warbaahinta ayaa uu Mahadceliyey Madaxweynihi Hore ee Puntland Mudane Cabdiraxmaan Sheikh Maxamed Maxamuud Faroole oo dhaawan Baaq Nabadeed uu Soo Mariyey warbaahinta beelaha Ku diriiraya Degaanka Qoriley…
DEG-DEG: Xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya oo war culus kasoo soo saaray dacwadii Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
MUQDISHO, Soomaaliya ­ Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud Ee Qaranka Soomaaliya ayaa sheegay inuu rafcaan ka qaaatay go’aankii Maxkamadda gobolka Banaadir ee lagu soo daayay Cabdiraxmaan Cabdishakuur. War kasoo baxay Xafiiska Xeer Ilaalinta ayaa lagu xaqiijiyay in Maxkamadda Rafcaanka gobolka Banaadir…
DEG-DEG: Cabsidii Xuutiyiinta ee Soomaaliland oo sii labo jibaarantay iyo Soomaaliland oo ku dhowaaqday inay joojisay guud ahaanba….
Somaliland ayaa la sheegay inay joojisay guud ahaanba hawlaha saldhiga milatari ee ay dawladda Imaaraadka Carabtu ka dhisanaysay magaalada Berbera. Ma jiro war rasmi ah oo ay dawladda Somaliland ka soo saartay arrintan, laakiin ilo xogogaala ayaa sheegay in wasiirka…
DEGDEG: AKHRISO: Mucaaradkii Farmaajo oo Muqdisho kaga dhowaaqay warkii ugu cuslaa, si degdeg ahna u codsaday in……………
Xisbiyada Wadajir, Kulan, Daljir iyo madasha Horusocod ayaa maanta oo Talaado ah waxay si wadajir ah usoo saareen war-saxaafadeed ay kaga hadlayaan xariggii C/raxmaan Cabdi Shakuur, qaabkii uu u dhacay iyo khasaarihii ka dhashay. Waxay sheegeen ugu horreyn in weerarkii…